यी हुन् यसै वर्ष उदायका आसलाग्दा नयाँ नेपाली हिरोइन
२०७५ सालमा झन्डै साढे दुई दर्जन नवयुवतीले हिरोइनका रूपमा डेब्यु गरे। जसमध्ये केहीले मात्र आफूलाई हिरोइनका रूपमा परिचित गराउन सकेका छन्, गराउँदै छन्।
धेरै भने कतिवेला आए, कता गए, अत्तोपत्तो छैन । यो खबर आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा लक्ष्मण सुवेदीले लेखेका छन् ।पछिल्लो केही वर्ष नेपाली फिल्म उद्योगमा नयाँ पुस्ताका कलाकारको हालिमुहाली छ ।
अभिनेतामा अनमोल केसी, प्रदीप खड्का, सलिनमान बानियाँ, पल शाहहरूको जगजगी छ भने अभिनेत्रीमा साम्राज्ञी राज्यलक्ष्मी शाह, पूजा शर्मा, आँचल शर्मा, स्वस्तिमा खड्का, वर्षा राउतहरू चर्चामा छन्।
अभिनेताको दाँजोमा ०७५ मा डेब्यु गर्ने अभिनेत्रीको संख्या बढी छ । गत वर्ष इन्टु मिन्टु लन्डनमा फिल्मबाट धीरज मगर युवा दर्शकमाझ छाए । सो फिल्मको चर्चासँगै उनलाई लिएर आई एम ट्वान्टी वान नामक फिल्म बन्ने चर्चा चलेको थियो। तर, सो फिल्मको सुटिङ अहिलेसम्म सुरु भएको छैन ।
अनुराग फिल्मबाट समुद्र पण्डितले डेब्यु गरे । तर, फिल्म असफल भएसँगै उनको चर्चा पनि ओइलायो ।पुराना पात झर्ने, नयाँ पालुवा पलाउने, यो त प्रकृतिको नियमै हो । प्रकृतिको परिधिदेखि कलाकारिता क्षेत्र अछुतो रहने त तर्कै भएन ।
हिजोका दिनमा भुवन केसी, राजेश हमाल, निखिल उप्रेती, विराज भट्ट, करिश्मा मानन्धर, गौरी मल्ल, निरुता सिंह, जल शाह, विपना थापा, रेखा थापा, झरना थापाहरूको जगजगी थियो।अहिले अनमोल, प्रदीप, साम्राज्ञी, पूजा, आँचलहरू चल्तीमा छन् ।
यी सँगै नयाँ हिरो–हिरोइनले पनि बजारमा आफूलाई चलायमान बनाउँदै लगेका छन्।गत वर्ष एक सयवटा फिल्म प्रदर्शन भएका थिए । जसमध्ये आधा दर्जन फिल्म मात्रै व्यावसायिक रूपमा सफल मानिन्छन् । कतिपय फिल्मले राम्रो व्यापार गरेनन्, तर सम्भावना बोकेका कलाकार भने जन्माएका छन्।
१. ०७५ को अन्तिममा प्रदर्शन भएको ए मेरो हजुर–३ को चर्चा अहिले पनि सेलाएको छैन । सो फिल्मबाट फिल्म उद्योगले नयाँ हिरोइन सुहाना थापा पायो । पहिलो फिल्मबाटै सुहानाले आफूलाई अब्बल अभिनेत्री साबित गरेकी छिन्।
यद्यपि, उनमा आगामी फिल्मको चुनौती भने थपिएको छ । अभिनेत्री, निर्देशक झरना थापाकी एकल पुत्री सुहानालाई अहिले दिनहुँजसो नै नयाँ फिल्मको अफर जाने गरेको छ । सुहाना भने दोस्रो फिल्म पनि आमाकै निर्देशनमा गर्न चाहन्छिन् ।
२. अभिनेता, निर्माता तथा निर्देशक भुवन केसीले आफ्नो फिल्म क्याप्टेनबाट नयाँ हिरोइन उपासना सिंह ठकुरीलाई प्रस्तुत गरे । क्याप्टेनले औसत व्यापार गरे तापनि उपासनाको अभिनय तथा सुन्दरताले भने तारिफ पायो । उपासनालाई निर्देशक रामबाबु गुरुङले कबड्डी कबड्डी कबड्डी फिल्ममा अनुबन्धित गरेका छन् ।
उपासनालाई आफ्नो फिल्ममा लिनका लागि निर्माता, निर्देशकले खोज्ने गरेका छन् । क्याप्टेनबाटै उद्योगमा आइन्, प्रियंका एमभी । तर, फिल्ममा उनको भूमिका र प्रस्तुति कमजोर भएकाले उनलाई हिरोइनकै रूपमा भने ‘मार्क’ गरिएको पाइँदैन।
३. हलिउड फिल्म डाक्टर स्ट्रेन्जमा सानो भूमिका देखिएकी शिल्पा मास्केको राम्रो चर्चा हुने गरेको छ । हेमराज बिसी निर्देशित द ब्रेकअपबाट नेपाली फिल्ममा डेब्यु गरेकी उनको पहिलो प्रयास सफल भएन । त्यसपछि शिल्पा अभिनीत अर्को फिल्म कागजपत्र प्रदर्शन भयो।
अपिल विष्टले निर्देशन गरेको कागजपत्रले पनि कमाल देखाउन सकेन । यद्यपि, शिल्पाको हातमा फिल्म भने परिरह्यो । उनले अभिनय गरेको अर्को फिल्म सानो मनको एउटा गीत हालै सार्वजनिक भएको छ । दुईवटा फिल्म लगालग फ्लप भए पनि शिल्पाको अभिनय, डान्स तथा एप्रिएन्सले निर्माता, निर्देशकलाई तान्ने गरेको छ।
४. अर्की आसलाग्दी हिरोइनमा पर्छिन्, आश्मा गिरी । ऋषिराज आचार्य निर्देशित ड्रिम गर्ल फिल्मबाट डेब्यु गरेकी उनी त्यसअघि रङ टाइम नामक वेबसिरिजमा चर्चित थिइन्। पछिल्लो समय म्युजिक भिडियोमा देखा परिरहेकी उनी फिल्म अभिनयमै करिअर बनाउन चाहन्छिन्।
शुभ लभ फिल्मबाट डेब्यु गरेकी सन् २०१७ की मिस टिन कृष्टिन पौडेललाई पनि सम्भावना बोकेकी हिरोइनका रूपमा हेरिन्छ । व्यावसायिक रूपमा शुभ लभ सफल नभए पनि दर्शकबाट भने राम्रो प्रतिक्रिया पाएकाले फिल्ममै केही गर्ने प्रेरणा मिलेको कृष्टिन बताउँछिन्।
५. माघ तेस्रो साता प्रदर्शन भएको रणवीर फिल्मबाट दुईजना हिरोइनको ‘इन्ट्री’ भयो–सुपुष्पा भट्ट र शुभेच्छा खड्का । व्यावसायिक रूपमा सफल नभए पनि रणवीरमा सुपुष्पाले गरेको कामले भने चर्चा पायो । तर, शुभेच्छाको प्रस्तुति प्रति भने दर्शकको नजर खासै पर्न सकेन।
रणवीरपछि आफूलाई केही फिल्मबाट अफर आएको तर परीक्षाका कारण ती अफर स्विकार्न नसकेको कथन उनको छ । ‘मलाई भोजपुरी फिल्मबाट पनि अफर आउने गरेको छ । तर, पढाइका कारण मैले त्यतातिर ध्यान दिन पाएकी छैन,’ उनी भन्छिन्, ‘अब भने म विचार गरेर ‘ओके’ गर्छु ।’ बुझिएअनुसार रोज राणाले निर्माण गर्न लागेको खलनायक–२ मा सुपुष्पा मुख्य भूमिकामा रहने सम्भावना छ।
६. समर लभ फिल्मकी रेवती क्षेत्रीलाई पनि सम्भावना बोकेकी हिरोइनका रूपमा हेरिन्छ । सुबिन भट्टराईको चर्चित उपन्यास समर लभमा निर्माण भएको फिल्मले व्यावसायिक सफलता भने हासिल गरेन। तर पनि उक्त फिल्ममा रेवतीले गरेको अभिनयले चर्चा पाएको थियो । भारतमा रहेर मोडलिङ गर्ने गरेकी रेवती चित्तबुझ्दो प्रस्ताव आएमा पुनः नेपाली फिल्ममा अभिनय गर्ने चाहना व्यक्त गर्छिन्।
७. भारतीय टेलिसिरियल चन्द्र नन्दिनीमा अभिनय गरेकी निरीषा बस्नेतले वसन्त अधिकारी निर्देशित जानी नजानी फिल्मबाट डेब्यु गरिन् । डेब्यु फिल्म असफल भए पनि निरीषाको कामले भने चर्चा पायो । अग्रज अभिनेता, निर्देशक विश्व बस्नेतकी छोरी निरीषा हाल मुम्बईमा चारका पञ्चनामा नामक सिरियलमा मुख्य भूमिकामा अभिनय गरिरहेकी छिन्।
८. यात्रा फिल्मबाट मलिका महतको डेब्यु भयो । म्युजिक भिडियोमा अभिनय गर्दैगर्दा यात्रामा प्रमुख भूमिका निर्वाह गर्ने अवसर पाएकी उनलाई पनि आसलाग्दी अभिनेत्रीका रूपमा हेरिने गरिएको छ । यद्यपि, यात्रापछि उनको हातमा फिल्म परेको खबर भने आइसकेको छैन।
९. गरुड पुराण फिल्मबाट डेब्यु गरेकी प्रियंका सिंह ठकुरीको अभिनय पनि मन पराइएको थियो । तर, त्यसपछि उनी फिल्मवृत्तमा देखा परेकी छैनन्।